Kubatsira Kwedu - Shenzhen KAISHENG PCB CO., LTD
Nei uchifanira kushanda nePCBFuture
Uri kutsvaga nyanzvi dzinozokubatsira kuungana zvemhando yepamusoro pcb prototypes uye yakaderera vhoriyamu inomhanya nenguva uye pamakwikwi mutengo?
Nemakumi emakore echiitiko muindasitiri yemagetsi, PCBFuture iri pano yekupa kumagumo-kumagumo kumisa imwe pcb Assembly masevhisi kune vagadziri nemabhizinesi.
Kunyangwe iwe uri wekugadzira zvemagetsi uchitsvaga yakasarudzika pcb gungano prototype kana bhizinesi reinjiniya rinotarisa kuunganidza diki-kune-yepakati vhoriyamu yakadhindwa wedunhu mabhodhi, isu tinoda kukupa iwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye basa rakanakisa.
1. Yakakwira mhando pcb yekugadzira masevhisi
Pcbc ndiro dombo rekona yezvigadzirwa zvemagetsi. PcbFuture kutanga bhizinesi kubva kudhindwa wedunhu bhodhi kugadzirwa, ikozvino isu tiri epasi-anotungamira akadhindwa wedunhu bhodhi kugadzira mabhizinesi. Isu takapasa UL chengetedzo chitupa, IS09001: 2008 vhezheni yehunhu system setifiketi, IS0 / TS16949: 2009 vhezheni yemotokari chigadzirwa chitupa, uye CQC chigadzirwa chitupa.
2. Turnkey pcb Service
Tiine ruzivo rwemakore anodarika gumi mukuvandudza, kunyepa, gungano uye kuyedza tsika maPCB, isu tave kugona kupa yakazara yakazara masevhisi, kubva kumumiriri pcb gungano, vhoriyamu pcb gungano, mhando dzakasiyana dzedunhu mabhodhi ekunyepedzera, zvinhu zvekusimbisa sevhisi. Yedu turnkey pcb sevhisi inogona kupa neye imwechete yekumira shopu nzira iyo inogona kukubatsira iwe kuchengetedza iyo mari, nguva uye matambudziko. Yese sevhisi yedu yakavimbiswa mhando uye mutengo unodhura.
3. Professional kumumvuri pcb gungano uye nekukurumidza tendeuka pcb gungano sevhisi
Prototype pcb gungano uye nekukurumidza shanduko pcb gungano yagara iri dambudziko kune vazhinji vagadziri vemagetsi nemakambani. PCBFuture inogona kutora yako PCB gungano prototype kwauri pamakwikwi mitengo nekukurumidza kutendeuka nguva. Izvo zvinokubatsira iwe kuisa zvigadzirwa zvako zvemagetsi kumusika nekukurumidza nemutengo unodhura. Tine hunyanzvi uye hwakachinjika prototype pcb gungano timu kubata ese maficha eichi chiitiko kusanganisira wedunhu mabhodhi ekugadzira, kutenga kwezvinhu, musangano wemagetsi uye kutonga kwemhando yepamusoro. Saka vatengi vedu vanogona kutarisa pane dhizaini uye vatengi mabasa.
4. Shorter lead time and low cost
Pachivanhu, vatengi vanofanirwa kuwana makotesheni uye vachienzaniswa kubva kune akasiyana maPBB vagadziri, zvikamu zvekuparadzira uye vaunganidzi vePCB. Kutarisana nevakasiyana vakaroorana kunotora yakawanda nguva yako nesimba, kunyanya nezvinhu zvakasiyana-siyana izvo zvakaoma kuwana. PcbFuture yakazvipira kubatsira iwe kugadzirisa matambudziko nekupa yakavimbika Imwe-mira pcb sevhisi, isu tinogona kupa ne prototype uye vhoriyamu PCB musangano webasa. Centralization uye kurerutsa basa, kugadzikana kugadzira uye kushoma kutaurirana kunobatsira kupfupisa iyo inotungamira nguva.
Inofanira kuzere turnkey pcb sevhisi ichawedzera mutengo? Mhinduro ndeye Kwete muPCBFuture. Sezvo yedu yekutenga huwandu hwezvinhu zvakakura kwazvo kubva, isu kazhinji tinogona kuwana zvirinani kuderedzwa kubva pasirese vanoziva zvikamu zvevagadziri kana vagoveri. Zvakare, edu epombi pombi masisitimu eiyo turnkey pcb maodha anogona kugona epakati kugadzirisa huwandu hwakawanda hweRFQs uye mirairo. Iyo yekugadzirisa mutengo wega wega turnkey pcb mapurojekiti ari kuderedzwa, uye mutengo wedu wakaderera pasi pemamiriro akafanana ehuhu vimbiso.
5. Yakanakisa kukosha wedzera sevhisi
> Hapana min hodha kuwanda kunodiwa, 1 chidimbu chinogamuchirwa
> 24 maawa technical rutsigiro
> 2 maawa pcb gungano kotesheni sevhisi
> Hunhu hunovimbiswa masevhisi
> Yemahara DFM cheki nehunyanzvi mainjiniya
> 99% + kugutsikana kwevatengi